Qodista Shidaalka iyo Dhaaminta Saliida- warshad soodhiyam leh iyo soosaarayaal | Pulisi
Qoditaanka saliida iyo dareeraha dhameystirka – sodium-ga ayaa sameysma
Qodista tamarta iyo alaabada ceyriinka waa ganacsi adag oo baahi badan leh. Xaraashyo qaali ah, jawi dagaaleed iyo xaalado juquraafi oo adag ayaa ka dhigaya mid adag oo qatar leh. Si kor loogu qaado faa iidada ka jirta meelaha saliida iyo gaaska, foomamku waxaay bixinayaan wax qabad aad u wanaagsan iyo faa'iidooyin deegaan. Teknolojiyada waxay sameyneysaa qodista heerkulka sare ee qulqulka xawaaraha sare, waxay yareysaa burburka dhismaha, waxay yareyneysaa kharashaadka howlgalka iyo bey'ada bay'adeed. Pulisi waa hogaamiyaha aduunka ee soo saarida sodium iyo potassium-ka wuxuuna si buuxda gadaal ugu laaban yahay. Waxaan wadnaa kayd ku filan oo aan ku gaarsiin karno codsi kasta oo lama filaan ah waxaana bixinnaa gaarsiinta ugu wax ku oolsan labadaba xagga maamulka iyo gaadiidka jidkaba. Wax kasta oo lagu ilaaliyo in cawsku sii socdo oo laga fogaado soosaarka qiimaha badan.
Alaabada ayaa loo sameeyay si ay u daboosho baahiyahaaga
Alaabooyinkayada ayaa si gaar ah loogu habeeyay qodista qoditaanka brine cad iyo dhammeystirka, waxayna la jaan qaadayaan waxyaabaha lagu daro walxaha polymer-ka ah. Brines-ka qaab-dhismeedka ayaa kor u qaada xasiloonida iyo xaddiga heerkulka ee biopolymers-ka loo isticmaalo dareeraha qoditaanka, tusaale ahaan xanthan xanjo. Biyo-dhismeedka ku saleysan sodium iyo / ama 'potassioum formate' ayaa si gaar ah waxtar ugu leh qodista ceel-biyoodka aan dhameystirka lahayn iyo cabitaannada dhammaystiraya, taasoo u oggolaaneysa dhismaha ceelal dhaadheer oo toosan oo lagu dhammaystiray god-furan. Dheecaannada qaab-dhismeedka ayaa sidoo kale ah xasilooni-xumo xagga shaleelka ah ee loogu talagalay dhoobada / shaleelka xasaasiga ah ee biyaha kujira Brines-ka qaab-dhismeedku kama kooban yahay qalab wax lagu miisaamo oo la micno ah inaysan jirin dhibaatooyin sag ah, ECD ka fiican (Isbarbar dhig ku habboon Cabbirrada), heerarka guud ee wareegga wanaagsan oo fiicnaaday iyo ROP (Rate Of Penetration).
Qulqulkayaga bilaashka ah ee Sodium Formate iyo fudeydka isticmaalka ee sugida iyo maaraynta iyo waqtiga adag ayaa la yareeyay si qiimaha hoos loogu dhigo. Nadaafadda cajiibka ah ee noo sameeysa ayaa kuu oggolaaneysa inaad sare u qaadid waxsoosaarka ceelka. Waxaa naga go'an inaan fulino baaritaanno farsamo si aan kaaga caawino xallinta arrimaha garoonka iyo inaan horumarinno qaababka dareeraha ee ku saleysan qaabab cusub.
Waqtiga boostada: Jun-02-2017